Okwamanje, kunezinhlobo abakhiqizi abaningi laptops. Phakathi kwabo kukhona ikakhulukazi ethandwa izinkampani ezinkulu kuphela njenge Samsung, LG, Apple kanye, yebo, Asus. Okwamanje, imikhiqizo ye lokugcina abakhiqizi ngenhla kuthandwa kakhulu, lokhu inkampani kunezinzuzo ezimbili eziyinhloko - kuba izinga imikhiqizo ngentengo ephansi. Namuhla sanquma ukwenza ukubuyekeza we laptop Asus F552C.
Ngaphansi kwalo brand igama laptops zenziwa nge ezahlukene amanani. Amafasitela ezitolo ungabona kamakhi wedivaysi asukela ezinkulungwaneni eziyishumi kuya amahlanu noma ngaphezulu. Lapha kakade kuzoncika izici kwemigomo umshini othile. Uma ufuna ukuthenga bona idivayisi entsha, lapho-ke sincoma ngokuqinile ukuthi ucabangele laptop Asus F552C. Le modeli kufanelekile kokubili umsebenzi nokuzijabulisa.
Ukuthola ukubuyekeza ngokushesha Asus F552C. Le divayisi ngokuqinisekile umxhwele zonke umthengi ezingase zivele, kusukela Onjiniyela ngempela umsebenzi omkhulu kule imodeli. Manje ku izinkomba ungafunda kabanzi. Le modeli laptop itholakala cishe kuwo wonke umuntu ukusebenza. Asus F552C okwamanje ithengiswe ngentengo ruble ayizigidi 17. Vele wafuna ukusho ukuthi laptop akulona enamandla. Ngakho, ukusebenza yesimanje ihluzo abahleli kanye izicelo ngenkani, ngeke isebenze. Ngosizo notebook Asus F552C ungakwazi ukudlala imidlalo ehlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, kulula ukusebenza izicelo ehhovisi, ubuke ama-movie noma ulalele umculo.
Aphathekayo Asus F552C ukucaciswa abe nesizotha ngakho, futhi sizobe ukukhuluma kubo ngokuningiliziwe. Idivayisi ukala 2.3 khilogremu, okuyinto, isimiso, ngempela inkomba njengoba kuqhathaniswa namanye amadivayisi efanayo. I-Laptop ububanzi 251 mm kanti ubude 380 mm, ukushuba kuyinto 32 mm. PC Notebook ifakwe-15.6 intshi kwesikrini ecwebezelayo. Screen Ukulungiswa - 1366 × 768 Amaphikseli. Kule divayisi, uzokwazi ukuba ngaphandle nzima kakhulu ukufaka uhlelo lokusebenza lwe-Windows 8, kodwa ngeke futhi kube lula phaka inguqulo yakamuva yesistimu yokusebenza ukusebenza, nalokho bekusayoba akukho yiqhwa.
Notebook abakhiqizi Asus F552C sezisungule processor yesimanje Intel, ke outperforms amamodeli ezibizayo ekilasini yayo. Lokhu processor ihlinzeka imvamisa iwashi 1800 MHz, okuyinto, isimiso, eyamukelekayo ukwenza izinhlobo ezahlukene imisebenzi. Futhi abakhiqizi notebook ungazange stinted phezu RAM kule imodeli setha 4096 MB, kodwa ivolumu disk hard - 750 kuphela GB, nakuba ezinye izinkinga, lesi sibalo esiphakeme. Ikhadi video ubuye bajabule. ivolumu Ezazimzungezile - 1024 MB, futhi ngokufanelekile, inani elikhulu amageyimu amasha, ngisho ingafakwa futhi asetshenziswa ngaphandle kwezinkinga.
Izimpawu idivayisi ngenhla maqondana nezindleko kuphezulu ngempela, nakuba okwamanje abakhiqizi siphishekele ezintsha futhi, ngokufanelekile, ekhishwe onobuhle bathambekele ngokushesha zibuye ziphelelwe isikhathi.
Ngizothanda futhi ukukhuluma ngezinto ezihlukahlukene kancane ukuthi zikhona imodeli elandelayo. Noma kunalokho, ukuthi esikhathini laptop inezici efana ne-Wi-Fi, i-LAN ne-Bluetooth. Ngalezi interface, ngeke nhlobo izinkinga nge ukufinyelela World Wide Web. Kulokhu, uzokwazi ukwenza kube nokuhlobana, kokubili esinqunyiwe futhi wireless.
Futhi kule imodeli laptop uyakhile webcam. Ngakho, ukuthenga idivayisi eyengeziwe ukuqoshwa omthemba akudingeki.
Kulesi imodeli laptop, kukhona eyodwa encane, kodwa namanje abaphumeleli. abakhiqizi Ibhethri owabeke akuyona enamandla kakhulu. Ngenxa yalokho, ibhethri laptop bazokwazi ukusebenza amahora ambalwa nje kuphela (uma kucatshangwa ukuthi ngeke baye kuyi-Internet).
Ngokuvamile singaveza umbono omuhle lo imodeli notebook, kusukela izici futhi intengo ekhangayo ngempela futhi uhambisane nomunye. Kungase kube ukwehluleka kanzima umsebenzi disk. Ikhompyutha ephathekayo akuyona njalo uzimisele bakuchaza emva kokukhipha bese uxhuma kabusha.
Kungani esitshalweni kanye laptop amvalele phansi ngokushesha?
Yekuchumana ukuqala kanjani notebook ngaphandle inkinobho yamandla
Indlela ukususa ukukhanya kukhompuyutha ephathekayo: izindlela kanye nemiyalelo
Yini engayenza esikhundleni se-Arbidol? I-Analog eshibhile kune "Arbidola"
Kulesahluko: "Alchemy". Lo mdlalo "Alchemy": zokupheka kanye inhlanganisela
Ukudla ngama-parrots kufanele kube yizinga eliphezulu
Indlela ukupheka Meatless isinkwa Pita
Tarot Ukubhula "Celtic Cross"
Kusihlwa zezinwele for ezimfishane
Lucina - Iyini? okusho